Inja enkulu kunazo zonke kwihlabathi
Kuphi na Inkcubeko yezilwanyana
Ukugqiba inja "enkulu" kwihlabathi kunzima kunokuba kuve. Incwadi ethi "Guinness Book of World Records" ithathwa ngokuba ngumgca wezona "zinkulu," "ezinkulu," "zide kakhulu," kunye "nezinto ezincinci", abantu, indawo zeendawo, kunye neenja. Kodwa, incwadi yerekhodi empeleni inquma kuphela inja "enkulu kunazo zonke" yehlabathi-oko kukuthi, inkulu kangakanani inja xa imi emilenzeni yayo yeenyawo - kungekhona ngeyona ndlela "eyona nto inkulu."
Inja "enkulu" inene iyakuba yinto ephakamileyo, kodwa "i-Guinness" ayilinganisi izinja ngelo mitha, mhlawumbi ngenxa yokukhathazeka kweentlalo. Ukunikezelwa kwebhloko yenja enkulu kunazo zonke okanye inkulu kunazo zonke inokubangela ukuba abanini banokuphelisa izilwanyana zabo ngokulindela ukuzuzisa. Funda ukuze ubone ukuba ngubani oyena inja ende kunazo zonke emhlabeni, kunye nenkulu enkulu yeplanethi. Okuthakazelisayo, zombini izinja zihlala kweli lizwe.
UFreddy, Inja ye-Sofa-Munching
Inja yehlabathi ende kunazo zonke nguFreddy, ongama-7-foot-long-Greatest Dane, obizwa ngokuba uyayithanda inkukhu kunye nebhotela, "kodwa naye uhamba ngendlela engama-sofas engama-23," ngokutsho kwe "Daily Mail." UFreddy naye ulinganisa iinyawo ezi-3, 4.75 intshizi ezide xa emile kuzo zonke ezine.
Umnini kaFreddy, uClaire Stoneman, ohlala e-Essex, eNgilani, "uzinikele ngokupheleleyo kwi-'Guity Record Record 'kunye noodadewabo uFleur," kutsho i-Daily Mail. "Bangabantwana kum ... kuba andinabantwana," utshilo uStoneman, olala naye embhedeni wakhe noFreddy. Bafuna mna kwaye kulungile ukuba kufuneke. "
Ngokumangalisa kukuba, uFreddy wayengalindelekanga ukuba akhule kakhulu. "Ndamfumana iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba ndifanele ndiyenze ngenxa yokuba wayengenakucinga," ngoko uStoneman utshele iHostington Post. UFreddy wayengumncinci omncinci xa uStoneman amthatha ephakamileyo. Akukho mntu uxolisa ukuba uFreddy wayeza kukhula ukuba athi ityala lehlabathi.
Inja "enkulu kunazo zonke"
Kodwa, ngokukhawuleza: UBalthazar, omnye uDani Omkhulu ohlala eNgilani, unamamitha angama-7 ubude xa emile emilenzeni yakhe yindondo - malunga nesiqingatha seenyawo kunesiFreddy. U-Balthazar, nangona kunjalo, ucebise izikali kwiipounds ezingama-216, ama-pounds angama-42 ngaphezu kweyiphi inja emhlabeni, ngokutsho kwe "Metro," i-British Newspaper. Umnikazi wenja, uVinnie Monte-Irvine, ohlala e-Nottingham, eNgilani, wathi wathatha uBaltare kwivenkile xa engafani kakuhle.
"Emva kokulinganiselwa komntu wonke ekutyunjweni kwakunzima kakhulu kwaye sonke sasihamba nje ukuba sibone ukuba ngaba yindoda ephila kakhulu kunazo zonke emhlabeni," u-Monte-Irvine watshela "iMetro." Nangona ubukhulu bakhe bukhulu, abahlobo abangcono kakhulu bakaBalthazar ngamakati amathathu amancinci ahlala kwindawo ephakathi kweNgilani.
AbaPhathi beMibhalo yangaphambili
Ngo-Aprili 2, 2008, iHarlequin Great Dane egama linguGibson labizwa ngokuba ngumnini-title "Guinness" njengenja yehlabathi ephakamileyo. Xa emi emilenzeni emine, uGibson wayelinganisa amasentimitha angama-42.2 Wafa ngomdlavuza wethambo ngomhla ka-Agasti 13, 2009.
UGibson waphumelela ngenye i-Great Dane, iTitan, emva koko ngo-2010, yiGiant George, i-Great Dane eluhlaza okwesibhakabhaka eTucson, eArizona, owayengu-0.375 intshi ubude kuneTitan. Wayeqinisekiswa ngelo xesha njengeNtlaba yeTallest Living kunye neTestest Dog Ever.
UZeus, iGreat Dane eKalamazoo, eMichigan, wathatha eso sihloko waza wafumana umvuzo kwiNja yeTestest World. Ufumene lo mbhalo ngo-Oktobha 4, 2011, ukulinganisa amasentimitha angama-44, okanye ii-intshi ezingama-6 intshi, xa umile kuzo zonke ezine-nje 1.25 ubude obude ngaphezu kukaFreddy. Ngokudabukisayo, uZeus wadlula ngo-2015.
Iilligators kwiMigodi yaseNew York
Ngaba i-Moose yomsebenzi kwiHarness ikhoyo?
Ingaba Umlomo Wenja Ucocekile Kunokuba Ubantu?
Ifoto yeSigxina "saseNew York Rat"
"Intlanzi yeentlanzi" yathi kuLuhlu olufana neConon
Umfanekiso we-Raccoon ephethe ikati
Inkolelo: Ngaba le nto yayinamandla okuphuza iVodka kwiBhotile?
Indlela yokubhala iPhepha loPhando
I-Scorpionflies kunye ne-Hangingflies, iMecoptera ye-Order
Umlawuli waseRoma uTheodosius I
IBhayibhile yeBhayibhile malunga nabazali
I-Lees-McRae College Admissions
Imibuzo yoFundo kunye neNgxoxo, 'Alice in Wonderland'
Inkcazo kunye neNgxoxo yeGragram yoLinganiswa
URichard Nixon: UMongameli oMhlophe?
IYunivesithi yaseSt. Thomas Admissions
Izixhobo ze-Antique kunye nezinto ezingavumelekanga Ixabiso / iimilinganiselo
Umyinge weSizwe we-MCAT izikolo ze-2015
Iingcebiso zokuzikhusela: I-Cup ye-Orthodox
Indlela Yokubhala Intetho
Umculo weCalypso 101
Phezulu Stevie Nicks Iingoma ze '80s Ngaphandle kweFleetwood Mac
Ukujolisa kwiCluster Star Cluster
Uhlalutyo lwenkqubo kuRichard Selzer's 'The Knife'
I-Navadurga kunye neefom ze-9 zeHindukazikazikazi wamaHindu Durga
I-Scrapbooking Family Family History
In Astrology Kuthetha ntoni xa iNyanga iTaurus
Izikhuselo ze-NHL kunye neentlanzi: Imbali